Calligraphy vita tanana nataon'i Tolga Girgin | Famoronana an-tserasera
Ny sora-tanana 3D an'i Tolga Girgin dia saika mivoaka avy ao amin'ilay ravina
Calligraphy dia toy ny a endrika kanto razambe izay hitohy ho zava-dehibe indrindra raha mbola manohy mifampiresaka isika, na dia miaraka amin'ny fitaovana finday, solosaina ary gadget hafa aza dia saika mandalo zavatra taloha, toy ny boky vita pirinty na vinyl.
Na izany na tsy izany, ho gaga foana ireo manana tanana sy teknika tsara hiavaka amin'ny calligraphy azy, toa ny an'i Tolga Girgin izay saika mivoaka amin'ny pejy anaovana azy. Calligraphy an-tànana izay manana fahatsapana 3D lehibe araka ny ahitanao ireo sary zaraina.
Ny calligraphy 3D nataon'i Tolga Girgin, injeniera elektrika ary mpamorona sary any Torkia dia ohatra tena tsara ny fomba mitohy mivoatra ity zavakanto taloha ity rehefa mandeha ny fotoana.
Ireo litera sy teny nosoratan'i Girgin dia toa izany handeha hivoaka amin'ny taratasy toy ny hoe saika hitsambikina izy ireo eo imason'ny olona liana mijery ny pitsopitsony. Ny endrik'izy ireo mikoriana sy ny loko maivana aza dia manintona kokoa azy ireo.
Ny sombin'i Girgin dia avy amin'ny fanandramana fomba fijery sy alokaloka, ary araka ny hitanao amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia manana famaranana lehibe izy ireo. Ny calligraphy izay mitaky fotoana hamoronana teny ao anatin'ny 20 minitra na fehintsoratra ao anatin'ny adiny telo dia miankina amin'ny tetikasa na ny asa.
Ny vadiny Zeynep no nandrisika azy hanomboka kaligrafi ankehitriny. asehoy amin'ny alàlan'ny tambajotra, toy ny hita ao amin'ny ny Behance anao e Instagram. Mpamolavola sary izay nahita ny antony nahatonga azy hanana kaligrafi ary naneho teknika lehibe tamin'ny tolokevitra kanto nataony tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sora-tanana 3D an'i Tolga Girgin dia saika mivoaka avy ao amin'ilay ravina
Ny karipetra volon'ondry toy ny lumoty izay mitondra ny natiora ao an-tranonao